Halkan waxaa ah dhamaan banner aad heli karto 60 $ / bishii, oo ay ku jiraan Apple TV + - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Halkan waxaa ah dhamaan bannooyinka aad heli karto 60 $ / bishii, oo ay ku jiraan Apple TV + - BGR
Nofembar wuxuu noqon doonaa bil muhiim ah taxanaha socda ee Streaming Wars, iyadoo macaamiisha si tartiib tartiib ah ugaga guurayaan fiilooyinkii caadiga ahaa iyo bixintii TV-yada ee la bixinayay Netflix qurbaannada la siinayo iyo xalalka la midka ah.
Ku dhawaaqista Apple ee maanta laba faahfaahin oo muhiim ah oo qof walba filanayo, oo la xiriira adeegga soo socda ee Apple TV + - qiimaha iyo taariikhda la bilaabay (siday u kala horreeyaan 4,99 $ / bishii iyo 1er November) - waxay xoojineysaa soo galitaankeeda jahwareerka. tikniyoolajiyadda hadda jira iyo shirkadaha warbaahinta si ay u soo saaraan wax soo saar ballaaran. Waxay sidoo kale ka caawineysaa macaamiisha inay fahmaan, hadda oo aan ognahay inta ugu badan ee laga mamnuuco mamnuucista, waxay u badan tahay inay doortaan inay bixiyaan.
Apple waxay xaqiiqdii u dooratay qiimo dagaal oo ay ku tartameyso la tartamihiisa Netflix, kaasoo ku dhowaa inuu bilaabo, isaga oo adeegsanaya Waxay sidoo kale ka dhigeysaa qalabka Apple mid qiimo badan ku leh nidaamka. Runtii, laga bilaabo maanta, qof kasta oo iibsada iPhone cusub, iPad, Apple TV, iPod taabasho ama Mac wuxuu ku raaxaysan karaa hal sano oo bilaash ah Apple TV +.
Waa wax xiise leh in la ogaado halka aaladda Apple ee qulqulka cusubi ay ku habboonaan karto miisaaniyadda macaamiisha caadiga ah. , qaasatan inay is dhiibaan xirmo fiilooyin ah oo ay bilaabaan inay isku daraan oo ay is waafaqaan, iyagoo iska diiwaangelinaya adeegyo duug ah oo cusub iyo kuwo cusub. Halkaa marka ay marayso, waxaan jeclaan lahayn inaanu kuusoo bandhigno in kaliya 60 $ / bishii, aad iskugu ururin karto ururin qurux badan oo qurux badan oo xulashooyinka qulqulaya. Oo halkan waa sida.
Sidaan horayba u sheegnay, waxaad kaliya ku dari kartaa badankood adeegyada waa weyn ee waqtigan xaadirka ah kaliya $ 60 bishii. Tan waxaad ku sameyneysaa adoo ka bilaabaya aasaaska Netflix, HBO iyo Hulu, kuwaas oo horey u matalaa nuxurka waxyaabo badan.
Ku dar intaas oo ah nooca billaha ah ee Amazon Prime, iyo sidoo kale Disney + iyo Apple TV + streamers. , oo labadaba bilaabay Nofeembar (Noofembar '1er for Apple's, November's 12 for Disney's).
Markaad jabiso tan, qiimahaaga billaha ahi wuxuu noqon lahaa (adoo adeegsanaya qiimaha salka billaha):
HBO hadda: 14,99 $
Waxaas oo dhan, wadarta billahaagu waa inay gaaraan $ 60,94.
Waxaa jira dhowr godad, dabcan, iyo habab kala duwan oo loo sameeyo. Haddii aad bixiso Amazon Prime sicirka sanadlaha ah, waxaad farsamo ahaan badbaadin doontaa qiimaha billaha ah ee shirkadda haysa shirkadda. Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale rabto inaad ku darto TV toos ah Hulu, Disney + waxay sidoo kale bixisaa xirmo adag oo qurux badan 12,99 $ oo ay ku jiraan Hulu iyo ESPN + iyo sidoo kale Disney +. Marka lagu daro waxaas oo dhan, waxaad had iyo jeer ku dari kartaa kanaal shaqsiyadeed iyo shabakado laga yaabo inaysan raalli ka noqon karin qof walba, min Showtime ilaa CBS illaa xulashada qulqulka NBC.
Isku soo wada duuboo, ikhtiyaarka aan kor ku soo sheegnay oo keliya $ 60 bilood waa inay ku mashquulsan yihiin dadka intooda badan xilligan oo ay bixiyaan tiro badan oo ka kooban waxyaabo badan. Kusoo dhawow Dagaallada Streaming.
Sawirka Source: Sawirka by Tony Avelar / AP / Shutterstock